Dagaalo Culus Oo Goor Dhoweyd Dib Uga Qarxay Galbeedka Magaalada Gaalkacyo | Berberatoday.com
Dagaalo Culus Oo Goor Dhoweyd Dib Uga Qarxay Galbeedka Magaalada Gaalkacyo
Gaalkacayo(Berberatoday.com)-Dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa goor dhoweyd wax yar ka hor salaadii maqrib dib uga bilowday galbeedka magaalada Gaalkacyo oo maalmahanba xiisad colaadeed ay ka aloosneyd.
Wararka ayaa sheegaya in rasaas culus iyo qaraxyo waaweyn laga maqlayo goobaha dagaalku ka socdo oo labadii maalin ee u dambeysay ay isku hor fadhiyeen ciidamo kala tabaacsan labada dhinac.
Goob joogayaal ayaa sheegayey in dagaalkan ka hor maanta oo dhan rasaas goos goos ah laga maqlayey goobaha ciidamada dirirsani isku hor fadhiyaan.
Dagaalkan ayaa daba socda dagaal kale oo labo cisho ka hor halkaas ku dhexmaray ciidamada labada maamul kaasoo salka ku haya dhul lagu muransan yahay oo Puntland ay ka dhiseysay maxjar loogu talo galay xoolaha laga keeno koonfurta Somalia.
Dagaalkan oo khasaaraha ka dhashay aan la ogeyn ayaa ku soo aadaya xili maanta lagu waday in la kala qaado ciidamada labada dhinac ee halkaas isku hir fadhiyey ka adib xabad joojin ay shalay isla gaareen odayaal ka socday dhinacyada is haya, lamana ogaa illaa hadda cida jebisay xabad joojintii la gaaray iyo sababta ay suurageli weysay ciidamadii maanta loo balansanaa in lakala qaado.